Uhlalutyo lweXiaomi POCO M3: amanqaku, amaxabiso kunye nezimvo | I-Androidsis
URafa Rodríguez Ballesteros | 08/04/2021 18:00 | Ukuhlaziywa ukuba 11/04/2021 10:52 | Reviews
Namhlanje sikuzisa uphononongo olukhetheke kakhulu kwaye kulindeleke kakhulu. Sibenethamsanqa elikhulu lokuba sikwazi ukuvavanya Xiaomi Poco M3. Sonke esinolwazi oluthile nge-smartphone yanamhlanje sikhumbula ukuvela kwePoco Ifowuni yeF1 kwimarike.
Phantse ukusuka naphina, isixhobo esingaziwayo sakwazi ukuhoya wonke umntu. Nanamhlanje i-F1 isekhona phakathi kwezindululo zee-smartphones eziphakathi kwebala nikela ibhalansi elungileyo phakathi kokusebenza kunye nexabiso. Kodwa Kufika amalungu amatsha osapho lakwaPoco ukwenza i-niche phakathi kwezona zibalulekileyo, kwaye nantsi iPoco M3 ilingana ngokugqibeleleyo.
1 POCO, ifemi ngaphandle kwezakhiwo
2 Unboxing kwiPoco M3
3 Le yiPoco M3
4 Isikrini sePoco M3
5 Yintoni ngaphakathi kwePoco M3?
6 Ikhamera yePoco M3
7 Imizekelo yeefoto ezithathwe nge-M3
7.1 Inkqubo yekhamera
8 Ibhetri enamandla kunye nokuzimela
9 Ukhuseleko kunye nokunxibelelana
10 Ukucaciswa kwetafile
11 Okuhle nokubi
11.5 Malunga neGshopper
POCO, ifemi ngaphandle kwezakhiwo
Ukusukela oko kumiliselwa kwi-2018, iqinile iguqukele kwi, njengoRedmi, ngokwahlukana ngokusemthethweni noXiaomi njengophawu "oluzimeleyo". Kwaye ngodumo olwandulela inkampani ukuba isixhobo sayo sokuqala sikwazile ukushukumisa imarike, kunye nokhuseleko olunikezelwa yile nyani, esinye isixhobo esikhulu sifika, iPoco M3.
Emva kokumiliselwa kwesiqhushumbisi sePoco X3 ethe le nkampani ikwazile ukukrwela abalandeli kweyona ndawo iphakamileyo yentengiso. NgeM3, Okuncinci kunenjongo eqinisekileyo yokufumana isilayidi esifanelekileyo sephayi yaphakathi. Njengoko sihlala sisitsho, ifomula Ilula njengoko kunzima ukufezekisa: Imveliso elungileyo ngexabiso elihle.
IPoco M3 yiyo ubizelwe ukuba ngowona mthengisi uqinisekileyo Ngexesha lama-2021. Ngaphantsi nje kweenyanga ezine kwintengiso ikwazile ukuphela kwesitokhwe esikhoyo amaxesha ngamaxesha Kuzo zonke iindlela zentengiso. Ngokuqinisekileyo uphawu olucacileyo lokuba kuyatshayela ukuthengisa kwaye ingaqhubeka nokwenza njalo kwiinyanga ezizayo. Ukuba le smartphone yile nto ubuyikhangela, ngoku unokufumana eyakho MNCINANE M3 kwiGshopper elona xabiso libalaseleyo.
Unboxing kwiPoco M3
Njengoko sihlala sithanda ukwenza njalo, yi ixesha lokuvula ibhokisi kwaye ujonge yonke into esiyifumana ngaphakathi. Njengesiqhelo, asifumani ayothusi okanye nantoni na ekhethekileyo. Kodwa xa sele sithethile, sinezinto uninzi lwabo oluqala ukuzilahla kunye nezinye izinto ezingakumbi ezibalulekileyo esizixabisayo.
Sasifumana isixhobo ngokwaso, nangona besitshilo ukuba sinebhetri enkulu, ngaphantsi kobunzima kunezinye iifowuni ezininzi ezineebhetri ezincinci. Sikwafumana ifayile ye intambo yedatha kunye nomthwalo, kule fomathi ifomathi Uhlobo C lwe-USB. Kwaye i Itshaja yamandla, into eyimfuneko kubavelisi abathile ayisabalulekanga.
Njengokongezwa okubalulekileyo esinako umkhono we-silicone oguqukayo elingana njengeglavu nefowuni. Yinkcukacha yokuba nesincedisi sokuqala esisoloko sifuna i-smartphone entsha kwasekuqaleni. Ngaphandle koko, Isikhokelo sokuQala esiKhawulezayo kunye nezakudala Amaxwebhu anxulumene newaranti.
Enkosi kubahlobo baka @Ndiyabonga Sivavanya iPOCO M3 emnandi. Apha sikushiya unboxing encinci. #ukubuya kwakhona pic.twitter.com/oZ4CdtDzl9
-I-Androidsis (@androidsis) Aprili 4, 2021
Le yiPoco M3
Kwi-Androidsis sihlala simi ngaphandle njengesiqalo esihle kunye nesibindi kuyilo lwaso nasiphi na isixhobo. Okwangoku kunzima ukwahlula kwabanye. Kodwa ngeenjongo ezaneleyo kunokwenzeka ukuba wenze imveliso engafaniyo nezinye. IPoco M3 yahlukile kwaye yinto entle kwaye iyaxatyiswa.
Into yokuqala llama la atención Ukusuka kwimo ebonakalayo iPoco M3 xa uyibambe ezandleni zakho ngasemva kwakhe. Indlela a imodyuli yekhamera kathathu, Esiza kuphinda sithethe ngayo kamva, idityaniswe kwinxalenye ephezulu yeyona ibetha kancinci. Kukhulu uxande ngombala owahlukileyo kunye nezinto ezahlukeneyo ezibekwe ngokuthe tye kwinxalenye ephezulu. Ungayithanda ngakumbi okanye incinci, kodwa yeyantlandlolo kwaye ijongeka intle.
Ngasemva nako Kufuneka sigqamise izinto ezisetyenzisiweyo. Kuya kucaca ngakumbi kuthi ukuba ukhetho lweplastiki LUYIMPUMELELO. Kunye Ukugqitywa okurhabaxa okunganyangekiyo, IPoco M3 imnandi kakhulu ngaphandle kwebala. IMHO, kakhulu ungcono kunomqolo ocwebezelayo ngokugqitywa okugqityiweyo okuphela kokukhutshelwa kweprint.
Thenga apha iPOCO M3 ngesaphulelo se-15%
Iplastiki ibuyile kwifashoni, ewe, inenkcazo-ngakumbi yomhla kunye neealloys ezenziwe ngcono. Ukwengeza kwi uzuze kakhulu, ngakumbi ngaphandle kwetyala le-silicone, ramaqhuma kunye nokukrwela okunokwenzeka kubhetele kakhulu.
En los ecaleni ukuthungwa okufanayo kunye nezinto zigcinwa, kwaye isikrini siyadityaniswa ngokuchanekileyo ngaphandle kwemiphetho okanye imiphetho ebukhali ukuphazamisa okanye ukonakala. Ukujonga emacaleni, sibona indlela ekhethwe ngayo umfundi weminwe icala. A Indawo apho abanye abavelisi baphela bekhuhla, kodwa abanye abanye abanjengoSony bayaqhubeka nokubheja ngeziphumo ezilungileyo.
Ngaphezulu kwesifundi somnwe, esisebenza njenge iqhosha lasekhaya ukuba siyacinezela, sifumana ulawulo lwevolumu ngeqhosha elide.
Kulo phezulu Ingaba i Iplagi yejack ye3.5 yee-headphone. Inkqubo ye- icale lasekhohlo kuphela slot kunye yetreyi yamakhadi. Gxininisa ukuba yi Itreyi ephindwe kathathu apho sinokufaka ngaxeshanye ii-SIM khadi ezimbini kunye nememori khadi enefomathi ye-Micro SD. Kwi ezantsi sifumana, ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, i umboko, i isinxibelelanisi sokutshaja ifomathi yesipho Uhlobo C lwe-USB, kwaye kuphela kwayo Isandisi-lizwi.
Isikrini sePoco M3
Eli lelinye lawona macandelo anamandla esi sixhobo. Iscreen sePoco M3 siyakwazi ukuyenza ime ngaphandle kwezinye iimayile ezihamba phakathi. Sifumene ngaphezulu kobukhulu be-intshi ye-6,53-intshi kwipaneli IPS ebonelela nge Isisombululo esipheleleyo se-HD Plus kwaye nge I-60 Hz yokuhlaziya inqanaba. Into enzima ukuyifumana kwiifowuni ezikuluhlu lwamaxabiso afanayo.
Njengomgaqo ngokubanzi, xa sijonga isixhobo saphakathi kuluhlu esikwi-euro ezilikhulu elinamashumi amahlanu, siyazi ukuba kufuneka siyeke izinto ezithile. Esinye sezona ziphambili siscreen esihlala sincinci kwaye ngaphezulu kwesisombululo esisezantsi. Nantsi i-M3 ifika inyathele ngenjongo ye unikeze ngamava omsebenzisi okhethekileyo ngakumbi, kwaye ukuba sele ikuqinisekisile Cofa apha ufumane eyakho elona xabiso libalaseleyo.
La ububanzi 19.5:9 ibonisa ubungakanani bepaneli yayo kwaye iyenze ilungele ukonwabela iividiyo kunye nomxholo wemultimedia ngendlela efanelekileyo. Inefayile ye- Iiphikseli ezingama-395 nge-intshi ezixineneyo (dpi). Ngaphandle kwamathandabuzo, isikrini esenza ukuba ibe mnandi kakhulu kwi-smartphone. Kwaye oku, ukongeza ekwenzeni umahluko, kuyenza ikhanye kwicandelo elinzima kangaka.
Isikrini sePoco M3 sinefayile ye- isixhobo sokungena kwepaneli yangaphambili efikelela kuma-83% efanayo. Ubudlelwane obulungileyo obufezekiswa kwinxalenye enkulu ngohlobo lwenotshi esetyenzisiweyo. Sinefayile ye- Inqanaba lokukhusela iglasi yeCorning Gorilla 3Ayisiyena mgangatho wakutsha nje wokhuselo, kodwa iya kuyenza imelane namanye amathontsi kunye nokukrwela kakuhle.
Isisombululo "sokufihla" ikhamera yangaphambili ngendlela encinci yenzekile ngokusebenzisa uhlobo lohlobo lokutsala. Singatsho ngolu hlobo lwenotshi ukuba inemfashini. Nangona sithanda oko kubizwa ngokuba yimingxunya kwiscreen ngakumbi. Enye yeengxaki esinokuthi sibeke kwisikrini kukuba ukuqaqamba kwayo akufikeleli kwabanye kwaye ngezihlandlo xa kucacile, bekunzima kuthi ukuba sifunde ngokucacileyo iscreen.
Yintoni ngaphakathi kwePoco M3?
Sigxila kwinto ephethwe yiPoco M3 ngaphakathi. Lixesha lokuba ndikuxelele ukuba yeyiphi le fowuni ye-smartphone ixhotyisiweyo ukuze ufumane umbono wento enokuyenza. Ukwenza ivitaminize i-M3 sifumane i-chip eyaziwa ngokuba yi IQualcomm SnapDragon 662. Iprosesa ithenjiwe ngabavelisi abanjengoOppo, iNokia, iNokia, iRealme okanye neXiaomi ngokwayo yeRedmi 9.
Sifumene enye I-Octa Core CPU enee-4 cores ezisebenza kwi-2.0 GHz kunye nezinye ezi-4 kwi-1.8 GHz. Icandelo lemizobo ligutyungelwe nge- GPU kunye ne IQualcomm, iAdreno 610. Singadlala ngaphandle kwengxaki nayiphi na imidlalo esiyithandayo ngaphandle kwengcaciso yenkcazo kunye nemizobo ebukhali kakhulu.
IPoco M3 ineenguqulelo ezimbini zememori i-ram, kwesi sihlandlo, isixhobo ebesikuvavanya sinaso 4 GB, nangona kukho uhlobo olunamandla ngakumbi nge 6 GB. Umthamo we ukugcinwa isuka 64 GB, kwaye ngendlela efanayo, kukho uguqulelo olunomthamo 128 GB. Sikwanakho nokwandisa imemori usebenzisa ikhadi leMicro SD.
Ikhamera yePoco M3
Ukuba besikhe sagqabaza ukuba isikrini yenye yamandla aso, asinakuthetha okufanayo ngekhamera. Mhlawumbi kunjalo sasinolindelo oluphezulu kakhulu. Nangona kufuneka sithathele ingqalelo ngalo lonke ixesha ukuba iPoco M3 yeyaphakathi kuluhlu kwaye inexabiso elikhuphisanayo nezixhobo zoluhlu olusisiseko.
Oko kwathiwa, ikhamera ye-M3 ayigqibi ukwenza umsebenzi ombi, apha ngezantsi singakhangela kwezinye iisampulu zeefoto ezithathiweyo. Akazithetheleli kakuhle kuphela, ikwanjalo Uyakwazi ukubonelela ngokubambisa okufaneleyo ngenqanaba eliphezulu leenkcukacha kunye nolwazi oluhle lombala. Imodyuli yekhamera yokutsala amehlo inefayile Iilensi ezintathu apho nganye ineenkcukacha ezahlukeneyo kunye nomsebenzi ochazwe kakuhle.
Ku Iilensi eziphambili Akukho nto incinci inayo inzwa Uhlobo lweSamsung S5KGM1 IsocellIsisombululo se Iimegapixels ezili-48 kunye nokuvula 1.79 kugxilwe. La segunda yeelensi ine I-Omnivision sensor OV02B10 yohlobo lweCMOS ene-focal aperture ye2.4. Inesisombululo se Iimegapixels ezili-2 kwaye uyayinyamekela Imo yomzobo ukufezekisa ngokugqibeleleyo isiphumo sobunzulu. Inkqubo ye- tercera yeelensi inesenzwa IHynix HI-259 ichwetheza i-CMOS, kunye nokuvula okujolise kuko kunye nokusonjululwa okufanayo Iimegapixels ezili-2. Le nzwa inoxanduva lokufaka iinkcukacha ezinkulu.
Ku ikhamera yeselfie ngaphambili, sifumana Ukwahlulahlula i-OV8856 yohlobo lwe-CMOS sensorkule meko ngesisombululo se- Iimegapixels ezili-8 kunye nokuvula 2.0 kugxilwe. Ikhamera egqibeleleyo kunye nesisombululo seminxeba esemgangathweni yevidiyo okanye iifoto zeeselfie.
Sinokungqina, ngaphandle koloyiko lokuba siphosisile, ukuba iPoco M3 inayo Icandelo lekhamera elifanelekileyo. Ngaphezu kwako konke, njengoko besesitshilo, sithathela ingqalelo uluhlu lwamaxabiso ahamba kuwo. Lo nto Ukudibanisa uninzi lwezona zinto zinamandla, iPoco M3 inokuba sisixhobo esingoyikiyo. Ukuba iPOCO M3 sele ikuqinisekisile, sukulinda ixesha elide kwaye thenga eyakho apha ngesaphulelo se-15%.
Imizekelo yeefoto ezithathwe nge-M3
Ukuba nembono eyiyo ngakumbi ngendlela esebenza ngayo ikhamera, siye saphuma saya kuvavanya kwaye apha sikushiya isampulu encinci yezinto ezenziweyo.
Kulo mfanekiso, Singaxabisa kubo bonke ubukhazikhazi bayo ukuba ikhamera ye-M3 inakho ukubonelela. Njengoko kuqhele ukwenzeka ngeekhamera zaso nasiphi na isixhobo, banikele ngokusemandleni abo ngokukhanya kwendalo okuhle kwiindawo ezivulekileyo. Kodwa kule foto siyayixabisa ngokwenene imibala, Las iindlela izinto ezingaphambili, nkqu nokusondeza ngaphakathi.
Kananjalo ayinakuphepheka loo nto kwindawo ekude kakhulu ingxolo ethile iqala ukuqatshelwa kwaye imigca iyabhideka kancinci. Into echaphazeleka nakwizinto ezifotyiweyo.
Apha sinokuqonda, kwifayile ye- Ifoto yangaphakathi, Kunye ne- imibala eyahlukeneyo kunye nemibala bavelisa ngokuthembekileyo. Siqaphela ngaphandle kwamandla i izinto ezahlukeneyo kwaye ufumana i- inkcazo elungileyo.
Kule nto iinkcukacha, ikwaboniswa ngokucacileyo inkcukacha kuburhabaxa nakwizixhobo. Ngcono inkcazo ifunyenwe umbulelo kukukhanya okungcono. Ngokuqinisekileyo, inqanaba elifanelekileyo lobukhali kwinto ephambili.
Apha sibeka I-POCO M3 yekhamera yedijithali yokusondeza. Yifoto yokuma komhlaba ethatha indawo eninzi, kwaye ngokubanzi ifoto esemgangathweni esemgangathweni.
Ngayo yonke i-zoom esetyenzisiweyo, njengoko kulindelwe, isisombululo esilahlekileyo kwaye iipikseli ziyavela. Iyakwazi ukufumana izinto kufutshane, kodwa ukusebenzisa ifoto eneli nqanaba lokugqwetha akunakulindeleka.
Sisoloko sithande isicelo sekhamera ye-MIUI. Nangona ngokubonakalayo inesidima kwaye ayibonisi kakhulu, Ukuziqhelanisa kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye kuyasebenza. Sifumana lonke useto esinokulufuna kunye nolunye olongezelelekileyo kwezona zihambele phambili ngoseto olwenziwayo.
Si iindlela ezahlukeneyo zokufota Phakathi kwayo kubonakala imowudi yemizobo ekwaziyo ukuthatha imifanekiso elungileyo. Enye inkcukacha ekufuneka igcinwe engqondweni yile ukuba sifuna ikhamera ivelise ezona zixhobo zinamandla kwaye iifoto zifumana owona mgangatho uphezulu kuya kufuneka senziwe ngesandla khetha ukhetho lwe-48MP.
Ku iividiyo si Ukuphela kwexesha kunye kunye ukuhamba kancinci. Zombini ezi zikhetho zibonelela ngeziphumo ezilungileyo. Sikwanamathuba okuphumeza Iifoto zepanoram okanye indlela eya iskena amaxwebhu.
Into esingenakuyeka ukuphawula ngayo kukuba ikhamera Isenze sacotha kancinci xa sisebenzisa iifoto. Phakathi kokubanjwa kunye nenye kubonakala ngathi ifowuni ifuna imizuzwana embalwa ukuze inzwa iphinde ifumaneke kwakhona. Into ebonakala ngathi kukusombulula ngokugqibeleleyo ngokusekwe kwisoftware kuhlaziyo lwexesha elizayo.
Ibhetri enamandla kunye nokuzimela
Apha abenzi bePoco baphinde bakwazi ukwenza ukuba i-M3 ime ngaphandle kwabanye. Ibhetri izixhobo zethu sele phantse lelona nqaku libuthathaka. Kuqhelekile ukuba xa kukho iisenzi ezininzi, izikrini ezinkulu, kunye nokusetyenziswa ixesha elide, ukuzimela kwezixhobo zangoku kumile.
IPoco M3 ikwazile ukophula imiqobo emibini kwicandelo lebhetri kunye nokuzimela. Kubonakala ngathi ii-smartphones zine-cap yentelekelelo ngokwentlawulo yebhetri kwaye akukho zindawo zinentlawulo ephezulu kangako.
Iimpawu zePoco M3 ibhetri emangalisayo ye-6.000 mAh. Kwaye ngaphezulu, nge Ukuzimela okungaphaya kweentsuku ezimbini ezipheleleyo zobude. Impumelelo enkulu okoko ngamanye amaxesha sibonile iifowuni ezinebhetri elungileyo engalinganiyo ngokuthe ngqo kubude bayo. Uyaqaphela ukusebenza kakuhle kwamandla ukolula ibhetri yayo enkulu ukuya kwelona liphezulu.
Kufuneka iqatshelwe, ngakumbi xa sithetha ngebhetri enkulu, ukuba oku Ayichaphazeli ukuba isixhobo sinzima, kwaye ayinabungqingqwa obugqithisileyo. Ngawo onke ama-akhawunti yeyona iqhelekileyo kule ngqiqo. Kodwa masikhumbule, ngokuzimela ngaphezulu kweentsuku ezimbini ezizeleyo!
Elinye inqaku elithanda ibhetri yile ikhawulezisa ukutshaja. Iinkcukacha ezinomdla eziza kusivumela ukuba sibe ne-100% yentlawulo yethu yebhetri ngexesha elincinci kunokuba kulindelwe. Ingakumbi xa ucinga oko UPoco ukwabandakanya itshaja ekhawulezayo kwibhokisi yeM3.
Ukhuseleko kunye nokunxibelelana
Kweli candelo kufuneka sithethe ngalo umfundi weminwe. Njengoko besitshilo ekuqaleni, eyona nto ibalaseleyo kwindawo yokuqala yindawo ekuyo. Sivavanye izixhobo ngokufunda ngomnwe kwelinye icala kwaye sibonile ukuba ayisoloko isebenza njani. Ukuchaneka kunye nobungakanani zinento yokwenza apha, kwaye Kuya kufuneka siyiqonde into yokuba eli tyala lisebenze ngempumelelo.
Njengokhuseleko olongezelelekileyo, I-POCO M3 ikwafaka nethuba lokusebenzisa ikhamera yangaphambili ukuvula ngokuqaphela ubuso. Sivavanye ezinye izixhobo eziqhayisa ngokuvula ubuso kwaye bezikade zisebenza ngakumbi kunokuba bekunjalo.
Ukunxibelelana esikufumanayo Bluetooth 5.0. Kodwa kufuneka sithethe ngazo zombini ukungabikho okukhulu; NFC kunye ne5G. Kuqhelekile ukuba isixhobo esikolu luhlu lwamaxabiso singenayo i-5G, kodwa ukungabinayo i-NFC kunciphisa amathuba ayo kancinci. Kukwaphawuleka ukuphunyezwa ngu-Xiaomi wolwabiwo olwenziwe ngempumelelo MIUI kwinguqulo 12. Into enika isixhobo ubukho obuhle kakhulu, kodwa kubonakala ngathi musa ukugqiba ukuhamba ngokwendalo Kunesiqhelo.
Isikrini 6.53 HD epheleleyo +
Ifomathi yeScreen 19.5: 9
Isigqibo seskrini I-1080 X 2340 px-HD epheleleyo +
Ubuninzi beScreen I-395 ppp
Hlaziya izinga 60 Hz
Imemori eyandisiweyo I-Micro SD
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 662
ICPU I-Octa-Core 4x Kryo 260 2.0 GHz + 4x Kryo 260 1.8 GHz
GPU I-Qualcomm Adreno 610
Cámara trasera Inzwa kathathu 48 + 2 + 2 Mpx
Inzwa ephambili 48 Mpx
Inzwa yesibini yendlela yokubonisa 2 Mpx
Imowudi yoluvo lweMacro 2 Mpx
Ikhamera ye-selfie 8 Mpx
flash I-Dual LED
Utsalane obala Hayi
Ukusondeza kwidijithali SI
Ibhetri 5000 mah
Ukuhlawulisa ngokukhawuleza SI
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo Hayi
U bunzima 198 g
Ubukhulu 76.8 x 166.0 x 9.3
Ixabiso 169.99 €
Ikhonkco lokuthenga IPOCO M3
Lixesha lokuba ukuxelele, ngokwembono yakho, eyona nto sayithanda kakhulu malunga nePoco M3 kunye nezinto ezisenendawo yokuphucula. Konke oku ngelixa uphinda ukuba kubaluleke kakhulu ukugcina engqondweni ukuba sithetha ngako isixhobo esikumgangatho ophakathi esingadluli kwi- € 150 kwaye inikezela ngeempawu ezinqabileyo kakhulu.
La isikrini Alithandabuzeki elokuba omnye wabalinganiswa abaphambili bePoco M3. Amagqabantshintshi akhe isisombululo, ubungakanani be-6.53 kunye ne-60 Hz.
La I-6000 mAh ibhetri kunye engakholelekiyo inkululeko ezibonelela nge ngaphezulu kweentsuku ezimbini zokusebenzisa.
El xabiso IPoco M3 yenza kube lula kakhulu ukuthatha isigqibo kwi-smartphone xa unohlahlo-lwabiwo mali olunqongopheleyo, ayinalo ukhuphiswano.
El uyilo Esi sixhobo sifanelwe ukuba sibe phakathi kwe "pros". Ngenxa yokuba isetyenziswe kakuhle kangakanani iplastiki ngaphandle kokwenza ukuba imveliso ibonakale ikumgangatho ongaphantsi, ngokuchaseneyo.
Ukungabikho esikujonga kubalulekile, iPoco M3 ayinayo i-NFC, into esiyiphosileyo.
La usetyenziso lwekhamera yefoto Ayilinganisi ukufikelela kwabanye xa kufikwa kwisantya sokusebenza. Xa sithatha iifoto siqaphele i-lac encinci ekuqhubeni imifanekiso.
El Ukuqaqamba kwescreen hayi ukuya phezulu kwindawo eqaqambileyo.
Siphose i5G, njengoko besinokutsho ngayo nayiphi na i-smartphone yamva nje, kodwa kwakhona kufuneka sazi ukuba sikuluphi uluhlu lwamaxabiso esikulo.
Abasebenzisana nathi kolu hlaziyo, Umntu otyebileyo, Bafika benenkxaso ebalulekileyo ebaluleke kakhulu eyenza ukuba umngenisi wokuqala wekhompyutha wabathengi kurhwebo kunye iqonga le-commerce yeqonga lehlabathi kubathengi behlabathi. Enkosi kubuchwephesha bezimbiwa beteknoloji, bayakwazi ukufumana ezona mveliso zaziwayo emhlabeni ukuzithengisa ngexabiso elifanelekileyo.
Injongo yile Ezona mveliso zaziwayo ezivela kuwo onke amazwe zifikelela nakowuphi na umthengi wendawo. Kunye Iminyaka eli-11 yamava kwitekhnoloji nakwiDNA yehlabathi. Utyikityo ISingapore isekwe yintoni efumanekayo ekwandiseni ngokupheleleyo kwaye okwangoku ikhona kumazwe ali-18.
Ithunyelwe nge: 8 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 11 April 2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uhlalutyo lweXiaomi POCO M3: ngaba kufanelekile ngeenkcukacha zayo?